မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရခဲ့သင့်တာဘယ်အသင်းလည်းဆိုတာပြောပြလိုက်တဲ့ #ဇီဒန်း - SPORTS MYANMAR
မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရခဲ့သင့်တာဘယ်အသင်းလည်းဆိုတာပြောပြလိုက်တဲ့ #ဇီဒန်း
အေတီကို အသင်းရဲ့ ဝန်ဒါမက်ထရိုပိုလီတာနိုကွင်းကြီးမှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ မက်ဒရစ်ဒါဘီ ပွဲစဉ်မှာ ဂိုးမရှိ သရေ နဲ့ ပွဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးက ၂သင်း ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အခွင့်အရေးအချို့ရခဲ့ပေမယ့် ဂိုးအဖြစ်အပြောင်းအလဲမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်သင်းဟာ ရာသီကြို ICC ဖလား ပြိုင် ပွဲမှာ တွေ့ဆုံစဉ်ကနှစ်သင်းပေါင်း ၁၁ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်ကြိုက်ပွဲတပွဲဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲစဉ်မှာတော့ တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီမာ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးကို အသုံးမချနို င်ခဲ့လို့သာ ရီးရဲလ်အသင်း လက်စားချေခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Atletico Madrid’s Spanish defender Mario Hermoso (R) challenges Real Madrid’s French forward Karim Benzema during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on September 28, 2019. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
ွှီရီးရဲလ်အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းပိုင်း မတည်ငြိမ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပေမယ့် လာလီဂါ အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲစဉ်မှာလည်းအနိုင်ရဖို့လုံးလောက်မှုရှိခဲ့ပြီး သရေ တမှတ်ထက်ပိုတဲ့အရာကိုထိုက်တန်ခဲ့တယ်လို့ နည်းပြကြီး ဇီဒန်းကဆိုပါတယ်။
ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးတခုမှာ ဇီဒန်းက –
” ဒီလို ပွဲမျိုးမှာ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒရှိရုံနဲ့ မရပါဘူး။အရေးကြီးတာကတော့ ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ အင်အားတောင်တင့်ကြံ့ခိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာ တောင့်တင်းတဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းကို မြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီး ပေးဂိုးတဂိုးမှာခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အသင်းဟာ ပွဲအတွင်း အခွင့်အရေး ကောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင် စွမ်း ကင်းမဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လည်းကျွန်တော် တို့ လုပ်ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ တဲ့ အရာ တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မိကြပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Real Madrid’s French coach Zinedine Zidane gestures during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on September 28, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
နွေရာသီမှာ ချဲဆီးလ်ကနေ ယူရို သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဟာဇက်တယောက် အခုပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပျောက်ခဲ့လို့ ရိုဒရီဂွက်ဇ်နဲ့ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ်။ဇီဒန်းကတော့ ဟာဇက်ဟာ ချဲဆီးလ်အသင်းမှာရှိစဉ်ကခြေစွမ်းရောက်ဖို့ လိုနေသေးတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဇီဒန်းကဆက်လက်ပြီး – ” ဟာဇက်နဲ့အတူ ဆက်ပြီးရှိနေပေးရပါလိမ့်မယ်။သူကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေးသိပ်မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိအားတွေကနေလျော့ကျသွားစေဖို့သူ့ကိုဂိုးရစေချင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းပြသနာတော့မရှိပါဘူး။ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Atletico Madrid’s Montenegrin defender Stefan Savic (L) vies with Real Madrid’s Belgian forward Eden Hazard during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on September 28, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ လိဂ်ပွဲ၃ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးမပေးရတဲ့ အပေါ်ဇီဒန်းက – ”
အေတီကို အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပွဲတွေဆိုတာ လုပ်အားချင်းပိုသုံးရပါတယ်။ဒီကွင်းကလည်းတရာသီလုံးမှာလာကစားရအခက်ဆုံးနေရာတွေထဲကတခုဖြစ်လို့
ဒါပေမယ့် တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့က နေရာလွတ် သိပ်မပေးခဲ့ လို့ အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးရခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။၃မှတ်ပြည့်လိုချင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုရမှတ်တမှတ်ဆိုတာမများပါဘူး။အခုပွဲကခံစစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်။အရာရာတိုးတက်မှုရှိခဲ့လို့ ကျေနပ်စရာစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ခဲ့တယ် ထင်ပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
မကျဒရဈဒါဘီပှဲစဉျမှာ အနိုငျရခဲ့သငျ့တာဘယျအသငျးလညျးဆိုတာပွောပွလိုကျတဲ့ #ဇီဒနျး
အတေီကို အသငျးရဲ့ ဝနျဒါမကျထရိုပိုလီတာနိုကှငျးကွီးမှာ ကစားသှားခဲ့တဲ့ မကျဒရဈဒါဘီ ပှဲစဉျမှာ ဂိုးမရှိ သရေ နဲ့ ပှဲပွီးသှားခဲ့ပါတယျ။အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးက ၂သငျး ဆုံတှခေဲ့ကွတာဖွဈပွီး အခှငျ့အရေးအခြို့ရခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးအဖွဈအပွောငျးအလဲမလုပျနိုငျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈသငျးဟာ ရာသီကွို ICC ဖလား ပွိုငျ ပှဲမှာ တှဆေုံ့စဉျကနှဈသငျးပေါငျး ၁၁ဂိုးအထိသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ပရိသတျကွိုကျပှဲတပှဲဖွဈခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။အခုပှဲစဉျမှာတော့ တိုကျစဈမှူး ဘနျဇီမာ အကောငျးဆုံး အခှငျ့အရေးကို အသုံးမခနြို ငျခဲ့လို့သာ ရီးရဲလျအသငျး လကျစားခခြှေငျ့ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ှီရီးရဲလျအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ခွစှေမျးပိုငျး မတညျငွိမျမှုတှကွေုံတှနေ့ရေပမေယျ့ လာလီဂါ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။အခုပှဲစဉျမှာလညျးအနိုငျရဖို့လုံးလောကျမှုရှိခဲ့ပွီး သရေ တမှတျထကျပိုတဲ့အရာကိုထိုကျတနျခဲ့တယျလို့ နညျးပွကွီး ဇီဒနျးကဆိုပါတယျ။
ပှဲအပွီး အငျတာဗြူးတခုမှာ ဇီဒနျးက –
” ဒီလို ပှဲမြိုးမှာ ပွငျးပွတဲ့ ဆန်ဒရှိရုံနဲ့ မရပါဘူး။အရေးကွီးတာကတော့ ကြှနျတျောတို့အသငျးရဲ့ အငျအားတောငျတငျ့ကွံ့ခိုငျမှုပဲဖွဈပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ဒီပှဲမှာ တောငျ့တငျးတဲ့ ရီးရဲလျအသငျးကို မွငျလိုကျရတာဖွဈပွီး ပေးဂိုးတဂိုးမှာခှငျ့မပွုခဲ့ပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ အသငျးဟာ ပှဲအတှငျး အခှငျ့အရေး ကောငျးတှေ ဖနျတီးနိုငျ စှမျး ကငျးမဲ့ခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ လညျးကြှနျတျော တို့ လုပျဆောငျထားနိုငျခဲ့ တဲ့ အရာ တှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျောတို့ ကနြေပျပြျောရှငျမိကွပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နှရောသီမှာ ခြဲဆီးလျကနေ ယူရို သနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ရောကျလာခဲ့တဲ့ ဟာဇကျတယောကျ အခုပှဲမှာလညျးခွစှေမျးပြောကျခဲ့လို့ ရိုဒရီဂှကျဇျနဲ့ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယျ။ဇီဒနျးကတော့ ဟာဇကျဟာ ခြဲဆီးလျအသငျးမှာရှိစဉျကခွစှေမျးရောကျဖို့ လိုနသေေးတယျလို့ မှတျခကျြပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဇီဒနျးကဆကျလကျပွီး – ” ဟာဇကျနဲ့အတူ ဆကျပွီးရှိနပေေးရပါလိမျ့မယျ။သူကောငျးကောငျးလုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ကြှနျတျောတို့ အခှငျ့အရေးသိပျမရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဖိအားတှကေနလြေော့ကသြှားစဖေို့သူ့ကိုဂိုးရစခေငျြခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျးပွသနာတော့မရှိပါဘူး။ဖွဈလာမယျဆိုတာသခြောပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ လိဂျပှဲ၃ပှဲဆကျတိုကျ ဂိုးမပေးရတဲ့ အပျေါဇီဒနျးက – ”
အတေီကို အသငျးနဲ့ရငျဆိုငျရတဲ့ ပှဲတှဆေိုတာ လုပျအားခငျြးပိုသုံးရပါတယျ။ဒီကှငျးကလညျးတရာသီလုံးမှာလာကစားရအခကျဆုံးနရောတှထေဲကတခုဖွဈလို့
ဒါပမေယျ့ တိုကျစဈပိုငျးမှာတော့ သူတို့က နရောလှတျ သိပျမပေးခဲ့ လို့ အခှငျ့အရေးတှဖေနျတီးရခကျခဲခဲ့ပါတယျ။၃မှတျပွညျ့လိုခငျြခဲ့တာဖွဈလို့ အခုရမှတျတမှတျဆိုတာမမြားပါဘူး။အခုပှဲကခံစဈကတော့ကြှနျတျောတို့ကွိုးစားလုပျဆောငျနခေဲ့တဲ့အရာတခုဖွဈပါတယျ။အရာရာတိုးတကျမှုရှိခဲ့လို့ ကနြေပျစရာစှမျးဆောငျရညျဖွဈခဲ့တယျ ထငျပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။